February | 2011 | Reporting from Washington
Archive for February, 2011	အတိုက်အခံတွေကို နေရာပေးဖို့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်း မေတ္တာရပ်ခံ
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက အစိုးရသစ်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရပ်သားများ ပိုမို ပါဝင်ခွင့်ရပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ လိုလားချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ မူလ အခြေအနေကနေ တိုးတက်မယ့် အပြောင်းအလဲ အစပျိုးပြီလို့ မှတ်ယူပါကြောင်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် အနောက်နိုင်ငံတွေက ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ အခု သမ္မတအဖြစ် အရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မသမာမှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ အဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတဦး ဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကမှ အရပ်သားအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Burma’s president and vice-presidents are picked from the dominant military-backed party.
Two ex-generals andadoctor have been picked by Burma’s newly-elected parliament to leadacivilian administration, but analysts say military strongman Than Shwe is expected to pull the strings from behind.
Current Prime Minister Thein Sein,acareer soldier and general who joined the military junta in 1997 under paramount leader Than Shwe, was chosen Friday to become president under the country’s first civilian administration in halfacentury following much-criticized November elections.
They are Tin Aung Myint Oo, another retired top general, hardliner and Than Shwe ally, and Sai Mauk Kham,alittle-known ethnic Shan politician and medical doctor whose rise is viewed asamove to appease Burma’s numerous ethnic groups, many of which have been battling the government for decades.
He has been Than Shwe’s point man in talks with U.S. officials and with the governments of neighboring Southeast Asian states during the junta’s brutal rule, including the bloody crackdown on monk-led protests in 2007 that raised an international outcry.
“Thein Sein served under Than Shwe in the 88th brigade. He was involved in staff management duties rather than military operations. So, he wins the trust of Than Shwe in management and administration,” said Htay Aung,aThailand-based military analyst.
“As prime minister he has some experience in international relations, especially among countries of ASEAN [Association of Southeast Asian Nations] such as Laos, Vietnam and Cambodia,” said Sai Myint Thu, secretary of the Thai-based Network for Democracy and Development.
“Than Shwe would have considered Thein Sein’s advantage as the pointman in talks with officials under U.S. President Barack Obama,” he said.
U.S. Assistant Secretary of State Kurt Campbell said this week that Washington would continue to engage the Burmese government even though the November elections were “fatally flawed,” democracy icon Aung San Suu Kyi’s party remains outlawed, and most political prisoners continued to be locked up.
“The U.S. nevertheless still believes thataform of engagement to test the leadership in terms of its goals and ambitions is an appropriate next step,” he told reporters.
“We will be watching carefully and closely for positive signs but also stand ready to take steps should there beacontinuation of negative trends,” he said, without elaborating.
The convening of the Burmese parliament in the Naypyidaw capital on Jan. 31 took the country towards the final stage of the junta’s so-called “roadmap” toa“disciplined democracy.”
A quarter of the parliamentary seats were kept aside for the military even before the country’s first poll in 20 years in November, which was labeled asafarce by Western governments, rights groups and some Burmese opposition groups.
“Nobody expectedacivilian ethnic Shan doctor to becomeavice-president,” said Sein Kyi, editor of the Shan Herald Agency for News. “From the common public point of view, it isajoyful and proud moment, but we have to wait and see to the end.”
“There is no key role for ethnic nationalities in the junta-ordered constitution,” he said.
Reported by Zaw Moe Kyaw, Nyan Winn Aung and Nay Rein Kyaw for RFA’s Burmese service. Translated by Soe Win. Written in English by Parameswaran Ponnudurai.
ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့တွင် ဧပြီ ၁၆ ရက်က ကျင်းပသော နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေး လူထုအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သည့် KIO ၊ KIA ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပြည်သူလူထု ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: RFA)
KIO အဖွဲ့ရဲ့ နှစ် ၅၀ မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်ကနေ ၅ ရက်နေ့အထိ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၃) နယ်မြေ မိုင်ဂျာယန်ဒေသမှာ ကျင်းပနေပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ ဒီကနေ့ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာ KIO ဥက္ကဌ ဦးဇောင်းဟရား က တက်ရောက်လာတဲ့ ပြည်သူလူထု သုံးထောင်လောက်ကို ပင်လုံ သဘောတူညီချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဓိကထား ပြောသွားတယ်လို့ အခမ်းအနား တက်ရောက်နေတဲ့ ကချင်အမျိုးသားတဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“အဓိကတော့ ပင်လုံ သဘောတူညီချက် အကောင်အထည်ပေါ်တဲ့အထိ ကချင် လူမျိုးတွေ အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ တစုတစည်းတည်း လုပ်ဆောင်ရအောင် ဆိုပြီးတော့ တိုက်တွန်းတယ်။ တခြား တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း မဟာမိတ်လုပ်ထားတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ အားလုံးနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ့်အကြောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ညီလာခံ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အခြေအနေအထိ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်သွားရအောင် တိုက်တွန်းသွားပါတယ်”
ဒါ့အပြင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ကိုလည်း အင်အားတောင့်တင်းအောင် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း KIO ဥက္ကဋ္ဌက ပြောဆိုသွားပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဒီနေ့ အခမ်းအနား နောက်ဆုံးနေ့ကို ကချင် မနောအကတွေနဲ့ ကျင်းပပါတယ်။ အခမ်းအနားကို လာရောက်တဲ့ ပြည်သူတွေကို အာဏာပိုင်တွေက လွယ်ကျယ်မြို့ အနီးမှာ စစ်ဆေးမေးမြန်းတယ်လို့ အဲဒီ ကချင်အမျိုးသားကပဲ ဆက်ပြောပါတယ်။
“လဝက ရယ်၊ ရဲရယ် မှတ်ပုံတင်တွေကြည့် နာမည်တွေ ယူတယ်၊ လိပ်စာတွေ ယူတယ်။ လွယ်ကျယ်အထွက် ဆေးရုံကုန်းမှာ စောင့်ပြီးတော့ စစ်တာ။ တချို့က စိုးရိမ်ပြီးတော့ တခြားလမ်းကနေ လာကြတယ်။ တရုတ်ပြည်လမ်းပေါ့။ တပ်မဟာ အလိုက် တပ်မဟာ တစ် နှစ် သုံး လေး၊ တပ်မဟာ ငါး။ တော်တော်များများ လာတယ်။ ပြည်သူတွေက ပိုများတာပေါ့”
KIO အဖွဲ့ဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ KIO ကို နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းဖို့ စစ်အစိုးရဘက်က တိုက်တွန်းလာတဲ့ အချိန်ကစလို့ နှစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး အခြေအနေ တဖြည်းဖြည်း ဆိုးဝါးလာနေပါတယ်။
၁၉၆၁ ခုနှစ် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု အစိုးရလက်ထက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ ပြုလုပ်မယ့်အကြောင်း ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း ကချင်အမျိုးသား ဇော်တူး၊ ဇော်ဆိုင်း ဦးဆောင်ပြီး KIO အဖွဲ့ကို ရှမ်းပြည်နယ်မှာ စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်မှုအောက်က မြန်မာအစိုးရသစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုမို ပွင့်လင်းပြီး ဒီမိုကရေစီ နည်းကျအောင် လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သူ့ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြလိုက်တာပါ။
တချိန်တည်းမှာပဲ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေး အခုထက် ပိုမို အားကောင်းလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပြီး နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးမှာလည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုအားကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ တချို့ အင်အားကြီး အနောက်နိုင်ငံတွေလို မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်လက် ကုန်သွယ်နေပြီး ဆက်လက်ပြောဆို ဆွေးနွေးတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရ စစ်အစိုးရအပေါ် သဘောထား တင်းမာရင် နိုင်ငံရေးအရ အဓိက ထောက်ခံပြီး အဓိက ကုန်သွယ်ဘက် ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပိုနီးစပ်အောင် တွန်းပို့နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဂျပန်က သတိပေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို လူမှုရေးနဲ့ အရေးပေါ် အကူအညီ ကလွဲလို့ စီးပွားရေး အကူအညီပေးတာကို ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ကတည်းက ဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တွင် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူ ၂၀ဝ ကျော် ၂၀ဝ၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့က ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂျပန် JAM အဖွဲ့ရုံးမှာ စကားပြန်အဖြစ် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရတဲ့ လူ့ဘောင်သစ်အဖွဲ့က လက်ထောက်တာဝန်ခံ ကိုမြတ်သူကို RFA မှ ဦးဘအောင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား စမ်းချောင်း ကိုကိုကြီး ခေါ် ကိုသိန်းသန်းထွန်းနဲ့ ကိုမောင်မောင်လတ်ကို မောင်းတောထောင်၊ သတင်းထောက်တဦး ဖြစ်တဲ့ ရွှေသံစဉ် ကိုဝင်းမော်ကို ကျောက်ဖြူထောင်၊ ၈၈ ကျောင်းသား ကိုဇော်မင်း ခေါ် ဘောင်းဘောင်နဲ့ ကိုဇေယျာဦးကို စစ်တွေထောင် အသီးသီး ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်း စမ်းချောင်း ကိုကိုကြီးရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မမြင့်မြင့်သောင်းက RFAကို ပြောပါတယ်။“ကျွန်မက ကိုကိုကြီး ဇနီးပါ။ ကိုဝင်းမော် အမျိုးသမီးက ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့နေပါတယ်။ သူလှမ်းပြောလို့ပါ။ ကိုကိုကြီးနဲ့ မောင်မောင်လတ်ကို ဘူးသီးတောင်တဲ့၊ ဇော်မင်းနဲ့ ဇေယျာဦးကို စစ်တွေတဲ့၊ ကိုဝင်းမော်ကိုတော့ ကျောက်ဖြူလို့ အဲလိုမျိုး လှမ်းပြောလို့ပါ။ ဘာကြောင့် ပြောင်းရတယ်ဆိုတာတော့၊ ကျွန်မ မသိသေးဘူး။ သူတို့ လာမှပဲ သေသေချာချာ သိမှာပေါ့နော်။”
“အခုလို ကျန်းမာရေး မကောင်းပဲနဲ့ ဟိုး ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ နေရာတွေကို ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့ကတော့ မိသားစုအနေနဲ့ စိတ်ပူတာပေါ့နော်။”
မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထူးစိုးရိမ်တဲ့အတွက် မိသားဝင်တွေနဲ့ နီးတဲ့ထောင်ကို ပြောင်းရွှေ့ပေးတာမျိုးသာ ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ မမြင့်မြင့်သောင်းက ပြောပါတယ်။
“ကျွန်မက ဒီဇင်ဘာ လကုန်ပိုင်းက ကျွန်မ သွားတွေ့တယ်။ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးက သူ့မှာ သွေးတိုး နည်းနည်း ရှိတယ်၊ ဇက်ကျီးပေါင်းရှိတယ်၊ ဂရင်ဂျီနာ ဖြစ်နေတယ်၊ အဲဒီ ဂရင်ဂျီနာက ဟို ဆေးခန်းပြနေရတာပေါ့နော်၊ အခုလို ကျန်းမာရေးမကောင်း ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီထက် ဝေးတဲ့ နေရာတွေ ပို့လိုက်တော့ ကျွန်မတော့ အရမ်းစိတ်ပူတာပေါ့နော်။ ဆေးခန်းပြလို့ ရတဲ့နေရာဆို တော်သေးတာပေါ့။ အခုဟာက ဆေးခန်းပြ မရတဲ့ နေရာတွေ ရောက်သွားပြီဆိုတော့ အရမ်းစိတ်ပူတာပေါ့။”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စုစုပေါင်း ၂၂၀၀ နီးပါး ရှိနေဆဲပဲလို့ သိရပါတယ်။
သမတအသစ်အဖြစ် ဦးသိန်းစိန် တင်မြှောက်ခံရ
နယူးယောက်မြို့တွင် ကျင်းပသော ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က စကားပြောကြားနေသည့် မှတ်တမ်းပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
ပြီးခဲ့တဲ့နေ့က ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဒုတိယသမတတွေ ဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းစိန် အပါအဝင် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အမတ်လောင်း ဦးစိုင်းမောက်ခမ်းနဲ့ ဦးတင်အောင်မြင်ဦးတို့ ၃ ဦးထဲက လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်နဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးဝင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။“ရွေးချယ်ပြီးသွားပါပြီ၊ ဦးသိန်းစိန်ပါနော်။ ဒုသမတ နှစ်ဦးကတော့ ဦးတင်အောင်မြင်ဦးက ၁ ပေါ့၊ ၂ က ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းပေါ့ဗျာ။ မဲပေးတဲ့အခါကျတော့ လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်နဲ့ပဲ ခါတိုင်းလိုပဲ ပေးပါတယ်နော်။ အဲဒါကို ကြေညာတာကတော့ ၁ နာရီ ၁၈ မိနစ်မှာ ကြေညာတယ်။”
ဘာကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ဦးသိန်းစိန်ကို အစိုးရအသစ်အတွက် သမတရာထူး ရွေးချယ်လိုက်သလဲ ဆိုရင် သူဟာ နအဖ စစ်ရုံးမှာ အုပ်ချုပ်ရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအပိုင်းကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်လာသူ ဖြစ်တဲ့အပြင် အမြဲတမ်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အမိန့်ကို တသွေမတိမ်း နာခံသူ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးဌေးအောင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
“သူ့ကို ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ သူနဲ့က တပ်မ ဘဝမှာကတည်းက ဆရာတပည့် ဖြစ်ခဲ့သလို ဒီ စစ်ရုံးချုပ်မှာလည်းပဲ သူ စစ်ဦးစီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်ရော၊ နောက် တိုင်းမှူး ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်တွေမှာရော၊ စစ်ရေးချုပ် ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်တွေမှာရော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ သူတို့ကပေါ့လေ၊ တလျှောက်လုံးနီးပါး အတူတူ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိတယ်။”
“နောက်တခုက သူ့ကို ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း သူက ဒီ စစ်ဖက်မှာပေါ့နော်၊ တိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့ တာဝန်တွေနဲ့ စာရင် ဒီ staff duty လို့ ခေါ်တဲ့ စစ်ဦးစီးတာဝန်တွေကိုပဲ တလျှောက်လုံး ယူလာခဲ့ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူက စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အပိုင်းမှာပေါ့လေ၊ ထူးချွန်တယ် ဆိုတဲ့သဘောမျိုး တွေ့ရတာ ရှိတယ်။”
“ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲ သူ့ကိုပေါ့လေ၊ ယုံကြည် စိတ်ချတာရော နောက်တခုက သူ့ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်မှု အပေါ်တွေပေါ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကပေါ့လေ၊ ယုံကြည် စိတ်ချတာတွေကြောင့်ရော သမတကြီးအဖြစ်နဲ့ လျာထားပြီးတော့ တာဝန်ပေးတယ်လို့ ကျွန်တော်က ယူဆပါတယ်။”
နောက်ထပ် ကျင်းပမဲ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် လာမဲ့ အင်္ဂါနေ့ မနက် ၁၀ နာရီကျမှ ပြန်လည် ခေါ်ယူထားကြောင်း သိရပါတယ်။ သမတသစ် ဦးသိန်းစိန်အကြောင်းကို RFA မှ ဦးဇော်မိုးကျော်၊ ဦးဝင်းနိုင်နဲ့ ဦးနေရိန်ကျော်တို့က တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတို့၏ ဆက်ဆံရေး
သမတသစ် ဥိးသိန်းစိန်၏ ဘဝနောက်ကြောင်း
ရန်ကုန်မြို့၊ အလုံမြို့နယ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: RFA)
ဘယ်လ်ဂျီယမ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီအဆိုကို ထောက်ခံဖို့ အချိန်အတော်ကြာ စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့ဖို့ ထောက်ခံတာတွေ အခုလို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ များလာပြီး ဥရောပတခုလုံးမက တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာထိ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ကြောင်း Burma Action Belgium ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Mr. Peirre က RFA ကို ပြောသွားပါတယ်။၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ကျင်းပခဲတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယမ် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကနေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့ဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံအချက်တွေကို ဘယ်လ်ဂျီယမ် နိုင်ငံအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ အဆိုကို ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ဘယ်လ်ဂျီယမ် နိုင်ငံအပါအဝင် ၁၄ နိုင်ငံ ရှိပါပြီ။